Non womluki Bag Factory | Abavelisi beengxowa zeeNgxowa zaseChina ezingabonakaliyo, abaXhasi
Custom logo yoshicilelo PP elaminethiweyo Shopping Non womluki Bag
Ibhegi Nonwoven yenye yeengxowa zokuthenga ezithandwa kakhulu kwihlabathi liphela. Ixabiso elitshiphu, elisebenzisekayo nelifanelekileyo ukukhuthaza uphawu lwakho. Ukhetho olwahlukeneyo lweemilo ezahlukeneyo, umbala, s, kunye nesitayile.
Yenziwe ngelaphu ephothiweyo (ilaphu lenziwe nge-polypropylene, Spun-bond) Ilaphu elingalukwanga elenziwe ngezinto ze-virgin pp ezenza ibhegi yomelele. Ubunzima belaphu elingalukwanga buvela kwi-60gsm ukuya kwi-120gsm.
【Isivumelwano sokwenene】 Ukuveliswa kweFektri kuQinisekisiwe iingxowa zokutya, zitshiphu kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iimveliso. Ubungakanani obukhulu, obukhulu ngokwaneleyo ukuba ungapakisha nantoni na oyifunayo. Iibhegi eziphathwayo ezigqibeleleyo zokuthenga, ukutya, ukutya, ukugcinwa kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla!
Elungiselelweyo eco-friendly eshicilelweyo iphe emhlophe non ephothiweyo ibhegi tote
Isikhwama esininzi esingalukwanga yindlela elungileyo yokubonisa uphawu lwakho okanye njengesipho esifanelekileyo kubathandekayo bakho.
Ukuprintwa kuyafumaneka kumacala omabini. Inika umgangatho we-eco-friendly, olungeleyo nolusebenzayo.
I-PP engalukwanga ayibizi kwaye inikezela ngomgangatho obalaseleyo.
ibhegi yokuthenga enexabiso eliphantsi lokuthenga kunye nokushicilela